Lipetsk တွင်ဒုတိယအကြိမ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအတွက်ယူရို ၁၄၅ သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Potatoes News
စနေနေ့၊ ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၅
အာလူး processing ၏နည်းပညာ
Lipetsk ရှိဒုတိယအကြိမ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင်ယူရို ၁၄၅ သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်
ရုရှားနိုင်ငံရှိအေးခဲနေသောအာလူးထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်သည့် LWM RUS သည် Lipetsk ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Igor Artamonov နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး Lipetsk ၏အထူးစီးပွားရေးဇုန်ရှိလက်ရှိစက်ရုံ၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားနှစ်ဆကျော်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏသည်ရူဘီ ၁၃ ဘီလီယံ (ယူရို ၁၄၅ သန်း) ကျော်ရှိပြီးဒေသတွင်း၌နောက်ထပ်အလုပ်အကိုင် ၂၅၀ ကိုဖန်တီးပေးလိမ့်မည်။ "ဒါဟာ Lipetsk ဒေသအတွက်သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအလုပ်အကိုင်တွေဖန်တီးပေးပြီးဒေသခံလယ်သမားတွေနဲ့လူထုတစ်ခုလုံးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်" ဟု Igor Artamonov ကမှတ်ချက်ချသည်။
လိုင်းအသစ်သည်ကြီးထွားလာနေသောရုရှားနှင့် CIS စျေးကွက်များအတွက်အဓိကအာရုံစိုက်လိမ့်မည်။ အာလူးအားလုံးသည်ဒေသခံလယ်သမားများထံမှအရင်းအနှီးကိုကုမ္ပဏီမှအပြည့်အ ၀ ထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်သည်။ LWM RUS ၏အဓိကအစုရှယ်ယာဖြစ်သော Lamb Weston Meijer ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Marc Schroeder က“ French fry စျေးကွက်ဟာကမ္ဘာတစ် ၀ န်းကြီးထွားလာနေပြီးရုရှားကကျွန်တော်တို့အတွက်အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ပြည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်မှု၏ဤရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မဟာဗျူဟာဖောက်သည်များအားကျွန်ုပ်တို့၏ကတိက ၀ တ်နှင့်အနာဂတ်တွင်သူတို့၏တိုးတက်မှုအစီအစဉ်များကိုပံ့ပိုးပေးသည်ကိုပြသသည်။
စက်ရုံတည်ဆောက်မှုကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းစတင်မည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၃ အစောပိုင်းတွင်လည်ပတ်နိုင်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည်
Tags: LWM RUS
NPPL လယ်သမားများ - စိုစွတ်သောနွေ ဦး ရာသီ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ယခုအခါများစွာကွဲပြားနေသည်
ဇြန္လ 11, 2021
Tholen ကျွန်း - ပထမအာလူးကိုရိတ်သိမ်းခြင်း
ဇြန္လ 10, 2021
Castilla y Leónသည်ကောင်းမွန်သောအာလူးထုတ်လုပ်မှုကိုမျှော်လင့်သည်။ စားသုံးမှုကြီးမြတ်မသိသောဖြစ်ပါတယ်
ဇြန္လ 8, 2021
မေလ 31, 2021
09ခရစ်စမတ်10: 00 နံနက်5: 00 ညနေအာလူးနည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုနေ့
ဇူလိုင် ၉ ရက်မှ ၁၀း၀၀ မှ ၁၇း၀၀ အတွင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်အာလူးထုတ်လုပ်သူများအတွက်ပွဲကိုတက်ရောက်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှ 10: 00 မှ 17: 00 ရက်နေ့အထိ
•နည်းပညာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်အကြောင်းအရာအလိုက်စားပွဲဝိုင်းတွင်ပါ ၀ င်ခြင်း၊
စားနပ်ရိက္ခာနှင့်အပြောင်းအလဲအတွက်အာလူးအမျိုးမျိုးကိုစုဆောင်းရာတွင်ကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်ကုမ္ပဏီများ၏ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်နည်းပညာများကိုရှုပ်ထွေးစွာအသုံးပြုခြင်း၏လက်တွေ့ကျရလဒ်ကိုကြည့်ပါ။
ဆန်းသစ်သောစက်ယန္တရားနှင့်စက်ပစ္စည်းများ၏စမ်းသပ်မောင်းနှင်မှုတွင်ပထမဆုံးပါ ၀ င်ပါ။
၁။ HZPC Sadokas (မျိုးစေ့အာလူး)
၂။ EuroChem (ဓာတ်မြေသြဇာ)
၃) Lemken (စိုက်ပျိုးရေးစက်ယန္တရား)
၄) မနီတီ (ပစ္စည်းကိုင်တွယ်သည့်စက်ပစ္စည်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ)
၅) ချိုင့်ဝှမ်း (ကျွမ်းကျင်သောဆည်မြောင်းစနစ်)
ပွဲသို့တက်ရောက်ရန်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းထားရန်လိုသည်။ မေးခွန်းများအတွက် Syngenta နှင့် Grimme အဖွဲ့၏ဒေသဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
(သောကြာနေ့) ၁၀ နာရီမှညနေ ၅ နာရီအထိ
+386 69622745 ကိုခေါ်ပါ
© 2021 ကမ္ဘာ့ဖလား Potatoes news - အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖန်တီးခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ခြင်း AMA.
မေ့လျော့ Password ကို? စာရင်းသွင်းရန်
subscription ဘာသာစကားရွေးချယ်ပါ အဂၤလိပ္ ရုရှား Deutsch ဒတျချြ စပိန်
နိုင်ငံ အာဖဂန်နစ္စတန် အော်လန်ကျွန်းစု အယ်လ်ဘေးနီးယား အယ်လ်ဂျီးရီးယား အမေရိကန်ဆာမိုအာ အင်ဒိုရာ အင်ဂိုလာနိုင်ငံ အန်ဂွီလား အန္တာတိက ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါ အာဂျင်တီးနား အာမေးနီးယား ယူးဘား ၾသစေတးလ် သြစတြီးယား အဇာဘိုင်ဂျန် ဘဟားမား ဘာရိန်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဘာဘေးဒိုးစ ဘယ်လာရုစ် ဘယ်လ်ဂျီယမ် belize ဘီနင် ဘာမြူဒါ ဘူတန် ဘိုလီးဗီးယား Bonaire, စိန့် Eustatius နှင့်ဆာ ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနား ဘော့ဆွာနာ ဘူးဗက်ကျွန်း ဘရာဇီး ဗြိတိန်နိုင်ငံကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေတွေကို British Virgin Islands ဘရူနိုင်း ဘူလ်ဂေးရီးယား Burkina Faso ဘူရွန်ဒီ ကမ္ဘောဒီးယား ကင်မရွန်း ကေနဒါ ကိပ်ဗာဒီ ကေမန်ကျွန်းစု ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ ချဒ် ချီလီ တရုတ်နိုင်ငံ ခရစ္စမတ်ကျွန်း ကိုကိုးကျွန်း ကိုလံဘီယာ ကော်မ္မရိုဇ့် ကွတ်ကျွန်းစု ကော့စတာရီကာ ခရိုအေးရှား ကျူးဘား ရူရာ ဆိုက်ပရပ်စ် ချက်သမ္မတနိုင်ငံ ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ဒိန္းမတ္ ဂျီဘူတီနိုင်ငံ ဒိုမီနီ ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ အရှေ့တီမော အီကွေဒေါနိုင်ငံ အဲဂုတ္တုပြည်၌ အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ အီကွေတာဂီနီနိုင်ငံ အီရီထရီးယား အက်စ်တိုးနီးယား အီသီယိုးပီး ဖောက်ကလန်ကျွန်းစု ဖရိုးကျွန်းစု ဖီဂျီ ဖင်လန် ပြင်သစ် ပြင်သစ်ဂီယာနာ ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှား ပြင်သစ်တောင်ပိုင်းနယ်မြေ gabon ဂမ်ဘီယာ Georgia ဂျာမနီ ဂါနာ ဂျီဘရောလ် ဂရိနိုင်ငံ ဂရင်းလန်း နေးဒါ Guadeloupe ဂူအမ်ကျွန်း ဂွာတီမာလာ ဂါဇီး ဂီနီနိုင်ငံ ဂီနီဘစ် ဂိုင်ယာနာ ဟေတီ ဟာ့ကျွန်းနှင့်မက်ဒေါ်နယ်ကျွန်းများ ဟွန်ဒူးရပ်စ် ဟောင်ကောင် ဟန်ဂေရီ အိုက်စလန် အိႏၵိယ အင်ဒိုနီးရှား အီရန် အီရတ် အိုင်ယာလန် လူသား၏ကျွန်း ဣသရလေ အီတလီ အိုင်ဗရီကို့စ် ဂျမေကာ ဂျပန် ဂျာစီ ယော်ဒန်မြစ် ကာဇက်စတန် ကင်ညာ ကီရီဘာတီ ကိုဆိုဗို ကူဝိတ် ကာဂျစ္စတန် လာအိုနိုင်ငံ လတ်ဗီးယား လေဗနုန်တော လီဆိုသို လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံ လစ်ဗျားနိုင်ငံ လီချင်စတိန်း လစ်သူ လူဇင်ဘတ် မကာအို မက်ဆီဒိုးနီးယား ဒါဂတ်စကာ မာလာဝီ မေလးရွား မော်လ်ဒိုက် မာလီ မော်လ်တာ မာရှယ်ကျွန်းစု မာတီနစ် Mauritania မောရစ်ရှ မာယော့တ် မက္ကစီကို Micronesia မော်လ်ဒိုဗာ မိုနာကို မွန်ဂိုလီးယား မွန်တီနီဂရိုး မွန်ဆာရတ် မော်ရိုကို မိုဇမ်ဘစ် ျမန္မာႏုိင္ငံ နမီးဘီးယား Nauru နီပေါ နယ်သာလန် နယူးကယ်လီဒိုးနီးယား နယူးဇီလန် နီကာရာဂွာ နိုင်ဂျာ နိုင်ဂျီးရီးယား နီယူး Norfolk ကျွန်း မြောက်ကိုရီးယား မြောက်ပိုင်းမာရီယာနာကျွန်းများ ေနာ္ေဝး အိုမန် ပါကစ္စတန် ပလောင်း ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေတွေကို ပနားမား ပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံ ပါရာဂွေး ပီရူး ဖိလစ္ပုိင္ Pitcairn- ပိုလန် ပေါ်တူဂီ Puerto Rico ကာတာနိုင်ငံ ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ ပြန်လည်ပူးပေါင်းခြင်း ရိုမေးနီးယား ရုရှားနိုင်ငံ ရဝမ်ဒါ စိန့်ဘာသယ်လဲမီ စိန့်ဟယ်လီနာ စိန့်ကစ်နှင့်ဗစ် စိန့်လူစီယာ စိန့်မာတင် စိန့်ပီယားနှင့်မီကွီလွန် စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်း ဆာမိုအာ ဆန်မာရီနို စဝ်တုန်နှင့်ပရ ဆော်ဒီအာရေဗျ senegal ဆားဘီးယား seychelles ဆီယာရာလီယွန် စင္ကာပူႏုိင္ငံ စိန့်မာတင် ဆလိုဗက်ကီး ဆလိုဗေးနီး ဆော်လမွန်ကျွန်းစု ဆိုမာလီယာ တောင်အာဖရိက တောင်ဂျော်ဂျီယာနှင့်တောင် Sandwich ကကျွန်းစု ေတာင္ကုိးရီးယား တောင်ပိုင်းဆူဒန် စပိန် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ဆူဒန် ဆူရာနမ် Svalbard နှင့်ဇန်နဝါရီ Mayen ဆွာဇီလန် ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ ဆွစ်ဇလန် ဆီးရီးယား ထိုင်ဝမ် Tajikistan တန်ဇန်းနီးယား ထုိင္းႏုိင္ငံ တိုဂို အဘိဓါန် Tokelau Tonga ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂို တူနီးရှား ကြက်ဆင် တာ့ခ်မင်နစ္စတန် တူရကီနှင့်စိုးကော့စ်ကျွန်းများ Tuvalu အမေရိကန် Virgin Islands ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ ယူကရိန်း အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ယူနိုက်တက်စတိတ်မိုင်းနာ​​းပြင်ပကျွန်းများ ဥရုဂွေး ဥဇဘက် ဗာနူအာ ဗာတီကန် ဗင်နီဇွဲလား ဗီယက်နမ် Wallis နှင့် Futuna- အနောက်တိုင်းဆာဟာရ ယီမင် ဇမ်ဘီယာ ဇင်ဘာဘွေ
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်က cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်သည်အသုံးပြုနေသော cookies များကိုခွင့်ပြုချက်ပေးသည်။ ငါတို့လာကြည့်ပါ Privacy နှင့် Cookie ပေါ်လစီ.